ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သဝဏ်လွှာ ပေးပို့
True Online News
(71) နှစ်မြောက် တပေါင်းလပြည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ ချစ်ခင်လေးစားရပါသော ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများခင်ဗျား-
ယနေ့ကျရောက်သည့် (၇၁) နှစ်မြောက် ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့အခါသမယတွင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး စိတ္တသုခ၊ ကာယသုခ နှစ်ဖြာသော သုခတို့နှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သ အပ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၇၀၀ ကျော်၊ BC ၉၆၁ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်နေ့၊ စနေနေ့ လမဝင်မီ နေထွက်ချိန်၊ ကောင်းကင်တစ်ခွင် နေလနှစ်ပါး ထိန်လင်းထွန်းပြောင်သောအချိန်ကောင်းတွင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ဘုရင်ဖြစ်သော “သူရိယစန္ဒာ”ဟုအမည်ရှိသည့် မင်းကြီးကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါသည်။ သူရိယစန္ဒာမင်းကြီးသည် ရှေးကပွင့်ပြီးသော မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့နှင့် ဂေါတမမြတ်စွာ ဘုရားရှင်တို့၏ဓာတ်တော်၊ မွေတော်တို့ကိုစုပေါင်း၍ လေးဆူဓာတ်စံ ရွှေစာရံစေတီတော်ကြီးကို တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်း၊ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ တောက်ပသောခေတ်ကာလကို ဖန်တီးပေးခဲ့ကာ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြှင့်တင်ပေးခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် သာသနာ့ဒါယကာ မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးအဖြစ် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့က လေးစားတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါသည်။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့အနေဖြင့် ထူးခြားသည့်သမိုင်းအစဉ်အလာကိုအကြောင်းပြု၍ သူရိယစန္ဒာမင်း၏မွေးနေ့ဖြစ်သော တပေါင်းလပြည့်နေ့ (ဒဲဉ်သီးလာဗွေ)အား ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကျင်းပလာခဲ့သည်မှာ ယခုဆိုလျှင် (၇၁)နှစ် မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့သည် ရှေးယခင်ကရှိပြီးဖြစ်သော မွန်မြတ်သည့်အစဉ်အလာအတိုင်း ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူများဖြစ်ကြကာ မိမိတို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းတွင် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ထက်သန်စွာဖြင့် အခြားတိုင်းရင်းသားများနှင့်အတူ လက်တွဲပါဝင်ခဲ့ကြသူများလည်းဖြစ်သည်။လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှတ်တိုင်ဖြစ်သည့် ပင်လုံညီလာခံတွင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက် နေ့၌ ပင်လုံစာချုပ်ကြီးကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရာ ရှမ်းကော်မတီ(စော်ဘွားများ) အဖွဲ့မှ သထုံ(ဆီဆိုင်) စော်ဘွား (စပ်ခွန်ကြည်ကိုယ်စား) ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးဖြူ က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ကို သမိုင်းမှတ်တမ်းများက ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ဖော်ပြလျက်ရှိပေသည်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် နယ်ချဲ့တို့၏ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရမှုစနစ်ဆိုးကြောင့် တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုအချင်းချင်း အထင်လွဲမှားကာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) သည်လည်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ဦးအောင်ခမ်းထီဦးဆောင်သော ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) သည် အစိုးရနှင့်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီမှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူခဲ့ပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းများ တိုးတက်စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအား သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဥပဒေအရပေါ်ပေါက်လာသော ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဒေသဦးစီးအဖွဲ့၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှု ရလဒ်အသီးအပွင့်များကို ခံစားနေသည်ကိုလည်း များစွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအခြေအနေကို ညီနောင်ဘွား အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေသဖွံဖြိုးရေးတွင် ပညာတက်များပေါကြွယ်ဝရေးသည် အဓိကကျသည့်အလျောက် မိမိတို့၏ရင်နှစ်သည်းချာသားသမီးများကို ပညာတတ်များဖြစ်အောင်သင်ကြားပေးကြပြီး ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် ခေတ်မီကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပအိုဝ်းဒေသ၏လူမှုစီးပွားတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ကြရပါမည်။
ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့သည် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများတွင် မခိုမကပ်တစ်ယောက်တစ်လက်ဝိုင်းဝန်းကူညီ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး အိုးသစ်အိမ်သစ်တည်ဆောက်ပါကလည်း သစ်၊ ဝါး ရှိသူက မရှိသူကို တတ်နိုင်သမျှပေးကမ်းကူညီလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့အပြန်အလှန်ကူညီခြင်းကို ပအိုဝ်းဝေါဟာရ အရ “မာ့ပဒေါ့” ဟုခေါ်ဆိုပြီး “မာ့ပဒေါ့” ဓလေ့သည် လေးစားဖွယ်ရာဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ရှေးယခင်ကတည်းကရှိခဲ့သော “မာ့ပဒေါ့” ဓလေ့နှင့်အညီ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးအားတည်ဆောက်ရာတွင် ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးခဲ့သည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိသောကြောင့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားတို့နေထိုင်ရာဒေသများသည် ယခုအခါ အေးချမ်းသာယာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့မြင်ရလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံတော်၏အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည့် ဒို့တာဝန်အရေး(၃)ပါးကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ကာ အစဉ်အလာကြီးမားသော ပအိုဝ်း အမျိုးသားတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ ဘာသာစကား၊ စာပေများကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ပြီး ပြည်ထောင်စုကြီး တိုးတက်သာယာဝပြောစေရန် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး ဝိုင်းဝန်း ကူညီဆောင်ရွက်ကြပါစို့ဟု တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်း သဝဏ်လွှာပေးပို့အပ်ပါသည်။
#အဝ်းခွုမ်တဲမ်းဝက်ဆိုက်ယိုသားနဝ်,ခွေသွဉ်း ခွန်ခမ်းနောင် ဒျာ;သွူ သြ။ ခွေသွဉ်းအဝ်းအွိုးယိုလဝ်းဟွိုန်လွေ,ဗာ; ပအိုဝ်; မွိုးဖါဖြားဆားပေ;တန်ဖူးဝေးအများ ဗွေ;/ခွန်/နင်, သီးဖုံ;ဗွေ;သြ။ နီးဗွေ;သီး အဝ်;ရပ်မဲုင်, အဝ်;ဒုံမဲုင်, အဝ်;ဝေင်,မဲုင်,တရို,တဝ်း ပအိုဝ်;သ,တင်,လိတ်မဲ့ငါ လောင်းကိုယို နီဗွေ;သီး မဉ်;မဲဉ်သွော့,ဒါ; သတင်, ကဗျာ ဝတ္ထုဒွေါင်; ဝတ္ထုဆွာ, ဓါတ်ပွုံ; ဇာတ်တွယ်, ငဝ်းသ,ချင်, ပျော;သွင်;ခါ;ရာ ထာ,တယွို့ စတဲင်, အကျောင်,ခါ;ရာ;နဲုင်းယိုဖုံ;နဝ်, အကျောင်,ခါ;ရာ; နဲုင်းမဲုင်တရို,တဝ်း နီဗွေ;သီးတဲမ်းထွူ တဲင် ပသာလွဉ် နွောင်,ဖေ;ဒျာ;ခွေသွဉ်း ခွန်ခမ်းနောင်ထျ,နဝ်သွူသြ။ မဉ်;ပသာတွမ်; Facebook Messenger နဝ်, ပသာနွောင်ဒျာ; လင့်လယိုသွူ သြ။ https://www.facebook.com/u.d.ma.146 မဉ်;ပသာတွမ်; gmail နဝ်, ပသာနွောင်ဒျာ; လင့်လယိုသွူ သြ။ Petikham@gmail.com မဉ်;ပသာတွမ်; Viber နဝ်, ပသာနွောင်ဒျာ; ဖုန်းနံပါတ်လယိုသွူ သြ။ +959683083453
ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ...
ယခုလအတွက် သိန်းတစ်ထောင်ဆုရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ
ယနေ့(၁၄)ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလထေီဖှငျ့ပှဲတှငျ ပေါငျးတညျမွို့ နမေငျးထီဆိုငျပိုငျရှငျ ဦတငျစှမျး+ဒျေါနှဲ့နှဲ့ရီ မိသားစုတို့မှ အောငျဘာလထေီ သိနျးတဈထောငျဆုကွီးကို ဆှတျခူးသှားပါကွောငျး သိရပါတယျ။ Credit Source-Paungde UptoDate News #Myanmar_Online_News #ခရက်ဒစ်
Zawgyi ပအို့ဝ် (ဗမာ - ပအိုဝ်းသမိုင်း၊ အိုင်ပီအက်စ် - [pəo̰lùmjóʊ], သို့မဟုတ်တောင်သူ၊ ရှမ်း - ပ၊ ယူအက်စ်; အရှေ့ဖိုးကရင်၊ တံတား၊ စကရင်၊ တီ၊ သူ၊ ပအို့ဝ်ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏တတိယအကြီးဆုံးလူမျိုးစုဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ ၁,၈၀၀,၀၀၀ ခန့်  မှ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသောလူ ဦး ရေနှင့်အတူ  ပအိုဝ်း၏အခြားအမည်မှာ PaU, Phya, Piao, Taungthu, Taungsu, Tongsu and Kula ။ ပအိုဝ့် ပအိုဝ်နစွိုးခိုးခꩻ ဗမာ - ပအိုဝ်းနိုင်ငံများ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကလောအနီးရှိပအိုအမျိုးသမီးတစ် ဦး လူ ဦး ရေစုစုပေါင်း ၁,၄၀၀၀၀၀ (၂၀၁၄ est ။ ) လူ ဦး ရေထူထပ်သောဒေသများမြန်မာ၊ ထိုင်းဘာသာစကားများPa'O, မြန်မာ၊ ထိုင်းဘာသာ။ ပွင့်လင်းအမျိုးသမီးများဟင်းသီးဟင်းရွက်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း Pa'O အမျိုးသမီးများ သမိုင်း Pa'O သည်ဘီစီ ၁၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိယနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံ၏သထုံဒေသတွင်အခြေချခဲ့သည်။ သမိုင်းအစဉ်အလာအရ PaOO သည်ရောင်စုံအဝတ်အစားများ ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်အနော်ရထာသည်သထုံ Makaka မွန်ဘုရင်ကိုအနိုင်ယူသည်အထိ ပအိုဝ်းကျေးကျွန်များသည်သူတို့၏အနေအထားကိုပြသရန်မဲနယ်ဆေးဆိုးသည့်အဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပထမဆုံး သေဆုံးသူကို သင်္ဂြိုဟ်ရန် ညွှန်ကြားချက်စောင့်နေ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပထမဆုံး သေဆုံးသူကို သင်္ဂြိုဟ်ရန် ညွှန်ကြားချက်စောင့်နေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ စက်ခံထားရသူ အတည်ပြုလူနာတစ်ဦး မတ်လ ၃၁ ရက် မနက် ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ်က သေဆုံးသွားတယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီဗွီဘီကို အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့ လူနာနေထိုင်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ဖို့မြေရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်းထွန်းက ” ဆုံးသွားတာဟုတ်ပါတယ်။ အသုဘလိုက်ပို့တာ စီစဉ်ဖို့ကလည်း ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ညွှန်ကြားချက်တွေ မလာသေးပါဘူး။ ဘယ်သူလိုက်ပို့မလဲဆိုတာ အပေါ်ကဆုံးဖြတ်မှာပါ။ သင်္ဂြိုဟ်ဖို့ကိစ္စက ဘာလုပ်ရမလဲ ညွှန်ကြားတဲ့ အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ ခုတော့ဘယ်သူမှလိုက်ပို့ခွင့်မပြုထားပါဘူး။ ကျနော့်အနေနဲ့ဒီ သတင်းကိုတော့အတည်ပြုပါတယ်။ အရင်ကကောလဟာလထွက်တုန်းကလည်းမ ဟုတ်ရင် မဟုတ်ဖူးပဲပြောခဲ့တာ။ လောလောဆယ်တော့ မိသားစုတွေလည်းဘယ်သူ့ကိုမှ အပြင်ထွက်ခွင့်မပ မပြုထားပါဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့ လူနာနံပတ် ၅ (COVID-19 Case5)ဟာ နှာခေါင်းကင်ဆာရောဂါကို သြစတြေးလျနိုငငံမှာ တစ်လကြာ ဆေးကုသမှုခံယူပြီး စင်္ကာပူကနေမြန်မာနိုင်ငံ
စင်ျကာပူမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှု မွငျ့လာတာ ဘယျလောကျ စိတျပူစရာ ကောငျးသလဲ ဒီစာမကျြနှာ Facebook ဒီစာမကျြနှာ WhatsApp ဒီစာမကျြနှာ Messenger ဝမြှေပါ
ဓာတျပုံ မူပိုငျ စင်ျကာပူနိုငျငံဟာ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကူးစကျဖွဈပှားမှုကို ကိုငျတှယျဆောငျရှကျရာမှာ ထူးထူးခြှနျခြှနျလုပျဆောငျနိုငျခဲ့တံ့နိုငျငံပါ။ ဒီရောဂါကို နာမညျမတပျနိုငျသေးခငျကတညျးကိုက စင်ျကာပူမှာ အသှားအလာတှေ တငျးတငျးကွပျကွပျကနျ့သတျလိုကျသလို ရောဂါပိုး ဘယျကနေ ကူးစကျခဲ့သလဲဆိုတာကို ခွရောခံ တားဆီးဆောငျရှကျမှုတှကေို ထိထိရောကျရောကျ ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ပွီး ရောဂါ ကူးစကျမှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့တာပါ။ ဒါပမေဲ့ အခုရကျပိုငျးမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါ ဖွဈပှားမှုတှေ တရှိနျထိုးမွငျ့တကျလာခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ကွာသပတေးနမှေ့ာ ရောဂါ ဖွဈပှားသူ ၂၈၇ ဦး အထိ အမြားဆုံး ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီမတိုငျတဈရကျက တော့ ၁၄၂ ဦး ရှိပါတယျ။ အမြားစုဟာ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားတှေ စုပွုံနထေိုငျနတေဲ့ နရောတှကေ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ရောဂါကူးစကျမှုတှေ မဖွဈအောငျ လနဲ့ခြီ ရှောငျရှားနိုငျခဲ့အပွီး အခုအခါ စင်ျကာပူမှာကြောငျးတှနေဲ့ အရေးမကွီးတဲ့ စီပှားရေးလုပျငနျးတှေ ပိတျထားသလို လူတှကေိုလညျး အိမျထဲမှာပဲ နကွေဖို့ တိုကျတှနျးထားပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံးနိုငျငံတှထေဲက တဈခု ဖွဈတဲ့ စင်ျကာပူနိုငျငံဟာ သငျ့လြျောတဲ့ လုပျဆောငျမှုတှကေိုဆောငျရှ
ဇနီးသညျကတဆငျ့ကူးစကျခံရတဲ့ COVID-19 လူနာအမှတျ ၁၇ ပေါကျခေါငျးမွို့နယျဒုအုပျခြုပျရေးမှူးသဆေုံး ဒီစာမကျြနှာ Facebook ဒီစာမကျြနှာ WhatsApp ဒီစာမကျြနှာ Messenger ဝမြှေပါ
ဓာတျပုံ မူပိုငျ PAUK KHAUNG HOSPITAL Image caption အတညျပွုလူနာဖွဈတဲ့အတှကျ လူစုလူဝေးနဲ့ အသုဘအခမျးအနားလုပျခှငျ့ပွုမှာမဟုတျဘဲ ဆေးရုံကနေ တိုကျရိုကျပို့ဆောငျပေးမှာဖွဈ ပွညျဆေးရုံကွီး အထူးကွပျမတျကုသဆောငျမှာ ကုသပေးနတေဲ့ လူနာအမှတျ(၁၇)ဟာ ဒီကနေ့ ဧပွီ ၈ရကျနေ့ မနကျ ၃နာရီ မိနဈ ၄၀ မှာ သဆေုံးသှားခဲ့တယျလို့ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး ကနျြးမာရေးဦးစီး ဌာန၊ တိုငျးဦးစီးမှူး ဒေါကျတာအေးငွိမျးက ဘီဘီစီကို အတညျပွုပွောဆိုပါတယျ။ ပေါကျခေါငျးမွို့နယျ ဒုတိယအုပျခြုပျရေးမှူး (လူနာအမှတျ ၁၇ )ဟာ SOS ဆေးခနျးက သူနာပွု ဇနီးဖွဈသူ လူနာ အမှတျ ၁၅ ကနေ ကူးစကျခံခဲ့ရတာဖွဈပွီး ဧပွီ ၂ ရကျနမှေ့ာ ဓာတျခှဲအတညျပွုပိုးတှေ့ လူနာအဖွဈ သတျမှတျခံခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ " မနကျ ၃နာရီ၄၀ လောကျက အထူးကွပျမတျခနျးထဲမှာဆုံးသှားပွီလို့သိရတယျ။ မနတေ့နကေ့ထဲက အခွအေနကေကောငျးလာလိုကျ ဆိုးလာလိုကျဖွဈနတေော့ ရနျကုနျကလညျး အထူးကွပျမတျခနျးနဲ့ ပတျသကျပွီး မဆေ့ေးပရျောဖကျဆာတှလေညျး ၃ယောကျလောကျလာပွီးအားဖွညျ့ပါတယျ။ မနကေ့ သကျသာလာပွီး ည ၁နာရီလောကျကတြော့ ပွနျဖောကျလာတာ''လို့ ဒေါကျတာအေးငွိမျးက ပွောပွပါတယျ။ ကိုဗဈ-၁၉ ကာကှယျရေး ပိုးသတျခနျး မွနျမာနိုငျငံကကြောငျးသားတှေ
ကြောကျ၊ ပလိပျနဲ့ ကာလဝမျး ၊ မွနျမာတှေ ကွောကျခဲ့ရတဲ့ ကူးစကျရောဂါမြား ဘိုဘို ဘီဘီစီမွနျမာပိုငျး
ဒီစာမကျြနှာ Facebook ဒီစာမကျြနှာ WhatsApp ဒီစာမကျြနှာ Messenger ဒီစာမကျြနှာ Twitter ဝမြှေပ ဓာတျပုံ မူပိုငျ WELLCOME COLLECTION Image caption ၁၉ဝ၆ က မန်တလေးမှာ ပလိပျကာကှယျဆေးထိုးသူတစု မွနျမာစကားမှာ ကပျကွီးသုံးပါးက ကငျးလှတျပါရစလေို့ ဆုတောငျးလရှေိ့ပါတယျ။ သမိုငျးတလြောကျ မွနျမာပွညျမှာ ကပျဘေးတှကွေောငျ့ ပကျြစီးသှားတဲ့ မွို့ရှာတှေ ရှိခဲ့ကွောငျးလညျး သမိုငျးပါမောက်ခ ဒေါကျတာတိုးလှက ကုနျးဘောငျခတျေ ကြေးလကျ လူမှုစီးပှားဘဝ စာအုပျမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ကာလနာ ဆိုတဲ့ ဆိုးရှားတဲ့ ကပျရောဂါတှထေဲမှာ ကြောကျ၊ ဝမျးနဲ့ ဝကျသကျ စတဲ့ ရောဂါတှေ အပွငျ ပလိပျ၊ တုပျကှေးစတဲ့ ရောဂါတှလေညျး ပါပါတယျ။ တကယျက မွနျမာပွညျမှာ ကပျရောဂါတှေ ကူးစကျတဲ့ အကွောငျး သမိုငျးမှတျတမျးတှမှော ပါခဲ့ပါတယျ။ (၁၄) ရာစုက အငျးဝမွို့ကို တညျထောငျတဲ့ သတိုးမငျးဖြားဟာ ကြောကျပေါကျပွီး နတျရှာစံတာ ဖွဈသလို နောကျဆုံး မွနျမာဘုရငျ သီပေါမငျးရဲ့ သားတျော ရှကေိုယျတျောမွတျကွီးဘုရားနဲ့ နနျးကဘြုရငျဟောငျး ပုဂံမငျးတို့ဟာလညျး ကြောကျရောဂါနဲ့ တခြိနျတညျးလိုလို ကံကုနျခဲ့ကွပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ အနှဈတထောငျကြျော မွနျမာတှေ တရုတျပွညျဘကျကနေ လကျရှိနရောကို ရ
လာအို တစ်နိုင်ငံလုံးကို Lockdown ချလိုက်ပြီး တရုတ်မှ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကို ခေါ်ယူ
လာအို တစ်နိုင်ငံလုံးကို Lockdown ချလိုက်ပြီး တရုတ်မှ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကို ခေါ်ယူ ဒီကနေ့ မတ်လ (၃၀) က စပြီး လာအိုတစ်နိုင်ငံလုံးကို Lockdown ချ လိုက်ပြီလို့ မနေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ လာအို အစိုးရက ကြေညာပါတယ်။ ဒီ Lockdown ဟာ မတ်လ (၃၀) ကနေ ဧပြီလ (၁၉) ရက်ထိ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ပို့‌‌ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍရော နယ်စပ်ဂိတ်တွေပါ ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ တွေ ကာရာအိုကေတွေ၊ ဘားနဲ့ အရက်ဆိုင်တွေအားလုံး ကိုလည်း ပိတ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။ နောက် ပြီး လူ (၁၀) ဦးထက် ပို တဲ့ ဘယ်အစုအဝေးကို မဆိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံသားရော၊ နိုင်ငံခြားသား နဲ့ နိုင်ငံမဲ့တွေ အားလုံး အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ထွက်လို့မရတော့ပါဘူး။ လိုအပ်ချက်ရှိမှ သာ ထွက်လို့ရမှာပါ။ ဒီကာလ အတွင်း မှာအရေးကြီး လိုအပ်တဲ့ ‌ဆေးရုံတွေ၊ ဆေးဆိုင်တွေ၊ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာန တွေ၊ ဈေးဝယ်စင်တာတွေ၊ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပ‌ ရေတာ‌တွေကိုတော့ ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး အစိုးရက အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ လက်သန့်ဆေးရည်တွေ၊ မျက်နှာစည်း နဲ့တစ်ခြား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးထုတ်ကုန် တွေကို ဈေးတင်မရောင်းဖို့လည်း အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။ အစ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ လေးစား အတုယူဖွယ်ရာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ခိုက်ပုံ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ လေးစား အတုယူဖွယ်ရာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ခိုက်ပုံ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ပြည်သူနဲ့ အစိုးရ ဘယ်လိုလက်တွဲပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်နေကြသလဲ… တောင်ကိုရီးယားရဲ့ နေရာ အနှံ့အပြားမှာ ယာယီ ကားစင်တာ အသစ်တွေပေါ်နေတယ်..။ ကားတွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ လမ်းကဖြတ်ရတယ်..။ အဖြူရောင် အကာအကွယ် အ၀တ်အစားတွေ ဝတ်ထားတဲ့ လူတွေက လက်ပြလိုက်ရင် ကားရပ်ပြီး ကားမှန်ကိုချရတယ်..။ ကားမောင်းသူရဲ့ ပါးစပ် နဲ့ နှာခေါင်း ထဲကို ဝါဂွမ်းရှိတဲ့ ဝါဂွမ်း နားကြပ်တံပုံစံ) ကိရိယာအတံလေးထည့်ပြီး တံတွေးနဲ့ နှာရည် နမူနာကိုယူတယ်..။ တံတွေးနဲ့ နှာရည်…? ဟုတ်ပါတယ်..။ အဲဒီနေရာတွေဟာ ကားပြင်တဲ့ စင်တာမဟုတ်ပါ..။ ကားနဲ့ ဖြတ်ပြီး (drive-through COVID-19 screening) ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် စစ်တဲ့ စင်တာတွေဖြစ်ပါတယ်…။ ဗိုင်းရပ်စ် ရှိတယ်လို သံသယရှိတဲ့သူတွေဟာ ကားပေါ်ကတောင် ဆင်းစရာမလို၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရှိ၊မရှိ စစ်တဲ့ စနစ် (Test Program) ဟာ တောင်ကိုရီးယားက တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်..။ ကားမရှိ၊ ကားမမောင်းတတ်ရင်ရော..? ဖုန်းဆက်လိုက်ရင် အနီးဆုံး ဘယ်နေရာကို သွားပါလို့ ပြောတယ်.။ နောက်ထပ် အသစ်တစ
ထိုင်းနယ်စပ်ကနေ ပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အဖမ်းခံရ
ထိုင်းနယ်စပ်ကနေ ပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အဖမ်းခံရ (Zawgyi/Unicode) ထိုင်းနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေစတင်ချိန်မှာပဲ ထိုင်းကနေ မြန်မာနိုင်ငံထဲ တရားမ၀င်နယ်စပ်လမ်းကနေ ၀င်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၈၀ ထက်မနည်းကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့ သတင်းကို တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် မအေးအေးမာ သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေကာလ စတင်တဲ့နေ့ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းမှာပဲ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တာ့ခ်ခရိုင် ထ ဆိုင်လုဝနယ်မြေ အမှတ် ၇ ကျေးရွာ အုပ်စုနဲ့ အမှတ် (၃) ကျေးရွာအုပ်စုနယ်မြေတွေကနေ မြန်မာနိုင်ငံထဲ တရားမ၀င်နယ်စပ်လမ်းတွေကနေ ၀င်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၈၀ ထက်မနည်းကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ တပ်ရင်း (၄) နဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေက စောင့်ကြည့်နေချိန် အမျိုးသား ၄၄ ယောက်၊ အမျိုးသမီး ၂၃ ယောက်အုပ်စုတစု၊ နောက်အုပ်စု က အမျိုးသား ၉ ယောက်၊ အမျိုးသမီး ၅ယောက် ဖြစ်ပြီး အားလုံးက ဘန်ကောက်ကနေ ဆင်းလာကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဆိုပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်င